तातो पानीमा नुहाएर कमजोरी पखालिँदैन - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	तातो पानीमा नुहाएर कमजोरी पखालिँदैन
10th April 2019 300 views
चैत्र २४ मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको पाठक पत्र मार्फत अभिव्यक्त धादिङ आदमटारका कांग्रेस शुभचिन्तक कृष्ण कुम्पुरेको आक्रोष र निराशाले समग्र कांग्रेसको अहिलेको अवस्था प्रतिविम्वित गरेको छ । हुनपनि कांग्रेस निर्वाचनपछि पराजयका कार
णहरुको निरुपण गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउने काममा लाग्ने छ भन्ने आम शुभचिन्तकको अपेक्षा विपरित आन्तरिक लडाईं झगडामा व्यस्त छ । केही हप्ता अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल म्याग्दीको तातोपानी पुगेर नुहाएको खबर पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा छायो । आम विश्वासलाई आधार मान्ने हो भने देउवा र पौडेल विभिन्न खालका छालाका रोगहरुबाट मुक्त भए होलान । पछिल्लो समय गरेको देश दौडाहाबाट थाकेका नेताद्वयको शरिरले आराम पायो होला । तर के नेतृत्वको कमजोरीका कारण नेपाली कांग्रेसको अहिले जुन हालत भएको छ, त्यो कमजोरी म्याग्दीको तातो पानीले पखालेर लग्यो होला ? के तनलाई जस्तै नेताहरुको मनलाई गुटगत राजनीति नगर्ने गरी शुद्ध बनायो होला ? के तातोपानीमा नुहाएपछि सभापति देउवा गुटको नभएर समग्र कांग्रेस पार्टीको सभापति हुँ भन्ने सोचमा पुगे होलान ?
एक छिनलाई गएको निर्वाचनमा भएको कांग्रेसको लज्जास्पद हार नेतृत्वको कमजोरीका कारण थिएन भन्ने मानौं । यसको कारण दुई ठूला बामपन्थी दलबीच एकिकरण भएकाले हो भन्ने पनि मानि दिऊँ । निर्वाचनका बेला टिकट बेचेको भनि बजारमा चलेको हल्लालाई पनि निराधार मानौं । तर त्यस यता पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन र सरकारले गरेका गलत कामको विरोधमा उत्रन कांग्रेस नेतृत्वले नसकेको होइन ? हुनपनि देउवाले नेतृत्व गरेको तीन वर्षमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले भने झै कता छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बहुदलिय व्यवस्थामा संसद र सडक प्रतिपक्षको भनिन्छ तर यो एक वर्षमा कांग्रेसलाई नेपाली नागरिकले न त सदनमा सशक्त प्रतिपक्षको रुपमा देख्न पाए न त सडकमा नै ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्रतिक्रिया नदिएर मौन समर्थन गरेको कांग्रेसलाई त्यतिबेलै लुते प्रतिपक्षी भनेर धेरैले आलोचना गरे । निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्यामा संलग्नको खोजी र आवश्यक कानूनी कारवाहीमा सरकारले चरम लापरवाही ग–यो । राज्य हत्याराको संरक्षक र पिडितको घाउमा नूनचुक छर्ने काम गरिरहँदा कांग्रेस कर्मकाण्डी रुपमा मात्र प्रस्तुत भयो । संसदमा विश्वप्रकाश र गगन बाहेक जनताका आवाजलाई मुखरित गर्नेहरु देखिएनन् ।
निर्वाचन पछिको यो एक वर्षमा मूल्यबृद्धिले आकाश छोया । प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदसामु सरासर झुठो विवरण प्रस्तुत गरेर आफुलाई भएको जीकिर गरे तर न त कांग्रेसले महँगीका बारेमा बोलेर जनआवाजलाई मुखरित गर्न सक्यो न त ढंटुवा प्रधानमन्त्रीको मखुण्डो आम नागरिक सामु खोल्न सक्यो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै कुरा गरौं । नेपालमा उपभोग हुने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाउने र संकलित रकमबाट अर्थात नेपालीकै लगानीमा बुढी गण्डकी बनाउने भनेर रकम संकलन सुरु भयो । कोषमा जब अरबौं रुपैयाँ संकलन भयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकी चीनलाई रिझाउनकै लागि चीनिया कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा बुढी गण्डकी सुम्पिए । भनिरहनु परेन बुढीगण्डकी निर्माण कोषमा हरेक नेपालीको रगत र पसिना मिसिएको छ । तर सरकारले हाम्रो रगत र पसिना कमिसनसंग साट्यो । यो कुरा संसदमा र सडकमा सशक्त ढंगले उठाएर कांग्रेसले आम नेपाली नागरिक र खासगरी निर्वाचनका बेला ओलीको राष्ट्रवादको भुलभलैयामा परेर एमाले र माओवादीलाई मतदान गर्नेहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने होइन ? यत्रा सञ्चार माध्यमहरु छन्, तिनको उपयोग गर्नु पर्ने होइन ? पत्रपत्रिका मार्फत भन्नु पर्ने होइन ?
वाइडबडी विमान खरिद गर्दा २४ अर्व रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ । यत्रो भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस बोल्नु पर्दैन ? संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षिलाई छलेर कामहरु गरिरहेको छ, यसमा पनि कांगे्रस चुप छ । नियुक्ति सिफारिसका बैठकहरुमा उपस्थित भएर आफ्ना धारणा राख्नु साटो सभापति देउवा त्यसो गर्दैनन् । आखिर किन ? निकट विगत कै कुरा गरौं । सरकारले विधि र प्रक्रिया विपरित सर्वाेच्च लगाएतका अदालतमा न्यायाधीस नियुक्ति सिफारिस ग–यो । कानून र संविधानका ज्ञाताहरु यसले आफुहरुलाई चिन्तित तुल्याएको विचार प्रकट गर्दैछन् । तर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस नेतृत्व मौन छ । प्रतिक्रिया जनाएको भएपनि प्रतिक्रियाका लागि प्रतिक्रिया जनाउने काम भएको छ । सुनिदैं छ, कांग्रेसको भागमा पनि प्रधानन्यायाधिसको रोलक्रममा रहने गरी एक जना नियुक्ति सिफारिसका परेका कारण कांगे्रस नेतृत्व चुप बसेको हो । यदि यो सत्य हो भने यो भन्दा विडम्वना अरु के हुन सक्छ र ? न्यायालयबाट न्याय पाईन्छ भन्ने कुरामा आम नागरिक विश्वस्त हुन नसकिरहेका बेला भएको यस्तो घटनाले न्यायालय प्रतिको आस्था र विश्वासलाई झन घटाउने निश्चित छ । न्यायालयहरु फैसला दिन्छन्, न्याय दिदैनन् भन्ने कुरालाई यस्ता क्रियाकलापले बल पु¥याउने हुन्छ । खै यसमा कांगे्रस नेतृत्वको ध्यान ?
कांग्रेसले आफ्नो भूमिका राम्रोसंग निर्वाह गर्न नसक्दा नागरिकले दुःख पाएका छन् । आफ्नो जीविकासंग सम्वन्धित कुराहरु उठाएर कांग्रेसले घाउमा मलम लगाओस भन्ने आम चाहना छ तर कांग्रेस नेतृत्व यस्ता कुरामा बेखवर जस्तै देखिन्छ । अझै बेला घर्केको छैन, गुटउपगुटको राजनीति गर्न छाड्ने र नागरिकका दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्यालाई सडक र सदन मार्फत शसक्त ढंगले उठाउने हो भने कांग्रेसले पुःन जीवन पाउन सक्छ । यस तर्फ कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान जाओस् । तातो पानीमा नुहाएर यावत कमजोरी पखालिएको छैन ।
कानूनले तोकेको अबको दाम्पत्य जीवन
निकृष्टताको हद पार गर्दै भारतीय मिडिया